Mobile House: 91 PC Suit For Android phone
91 PC Suit For Android phone
iPhone, Android phone သုံးသူများ အတွက် iTunes မလိုပဲ App,Music,Movie,Books,Photo တွေကို စိတ်ကြိုက် ကူးယူပြီး PC ထဲထည့်မလား..?? PC ထဲကနေ phone ထဲသွင်း မလား..?? လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်နိုင်တဲ့အပြင် phone ထဲမှာ ရှိတဲ့ SMS တွေကို PC မှာ Backup လုပ်ထားပြီး အချိန်မရွေး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်.. အခြား features တွေများစွာလဲ ပါဝင်ပါတယ် Phone ရဲ့System ထဲကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက် စူးစမ်းလိုသူတွေ အတွက်လဲ အဆင်ပြေအောင် ထုတ်လိုက်တဲ့ တရုပ်က Free Software လေးပါ။
91 PC Suit for Android
ဒီ Software လေးကို Install လုပ်ပြီးလို့Run လိုက်တဲ့ အခါမှာ Language က Default အနေနဲ့တရုပ်လိုပေါ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ English Language အရင်ပြောင်းကြရအောင်...အောက်ပါပုံအတိုင်း အနီရောင်နှင့် ဝိုင်းပြထားသော ပန်းသီးပုံကို နှိပ်ပါ။ Drop down menu ကျလာရင် အပေါ်က ရေတွက်ရင် (၄)ခုမြောက် ကိုနှိပ်ပါ ပြီးရင် English ပြောင်းပေးလိုက်ပါ..။
Phone ကို USB/Wi-Fi သုံးပြီး PC နှင့်ချိပ်လိုက်ပါက မိမိဖုန်း နှင့် ပက်သက်သမျှ ဖိုင်တွေ အားလုံးကိုပါ မြင်တွေ့ နိုင်ပါပြီ။ ကျွန်တော် အသေးစိတ် မရေးတော့ပါဘူး အားလုံးက အရိပ်ပြရင် အကောင်ထင်ကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဆိုတော့ Screen shot အချို့ ကိုပဲ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Phone တွင်းမှ ဓါတ်ပုံများကို PC ထဲသို့Drag & drop နဲ့ ကူယူးနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါပုံကတော့ SMS ကို Microsoft Excel နဲ့ ပြန်လည်ဖွင့်ပြီး သိမ်းထားတဲ့ ပုံပါ၊ မြန်မာဖောင့် တွေကို ရွေးပြီး Zawgyi One ပြောင်းပေးလိုက်ရင် မြန်မာလိုပေါ်ပါပြီ။
၁) Management > SMS ကို click နှိပ်ပါ SMS ကိုဖွင့်နေပါပြီ
၂) ညာဘက် စာအိပ်ပုံထဲက တစ်ခုကို ရွေးပြီး More > Export to Excel ကိုနှိပ် လိုက်ရင် save သွားပါပြီ
၃) Saved file ကို Microsoft Excel နဲ့ ဖွင့်လိုက်ရင် အောက်ပါပုံအတိုင်း တွေ့ ရမှာပါ။
Posted by Mobile House at 1:04 PM
One Click to RECOVERY Mode